माधव नेपालविरुद्ध एक्सनमा उत्रियो देउवा सरकार — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमाथि देउवा सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । एक्सनमा उत्रिएर सरकारले नेपाल निकट युवा नेतालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट ‘केन्द्रीय पिपुल्स भोलेन्टियर’ काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाललाई कमजोर बनाउन सरकारले सामान्य मुद्धा पनि खोज्दै नेताहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ ।
रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–५ घर भएका बुढाथोकीलाई बैङ्किङ कसुर मुद्दामा पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी रमेश बस्नेतले बताए ।
उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट ‘केन्द्रीय पिपुल्स भोलेन्टियर’ काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष हुन् । बुढाथोकीले दिएको ८० लाखको चेक बाउन्स भएपछि पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । उनलाई काठमाडौँको धापासीबाट पक्राउ गरिएको एसपी बस्नेतले बताए ।
खातामा पर्याप्त पैसा नभएको चेक दिएकोबारे अदालतबाट म्याद लिएर काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बुढाथोकीले दरबारमार्गमा रहेको रोयल क्यासिनोमा फ्लस टेबलमा लगानी गरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरे । अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिब ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले सम्बोधनका एमाले विभाजन गरेकोमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि आक्रोश पोखे ।
पार्टी विभाजन अघि माधवकुमार नेपालसँगै रहेकी एमाले उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विभाजनको बाटो सही नभएको भन्दै पार्टीमा फर्किन आव्हान गरिन् । अध्यक्ष ओलीभन्दा पहिला सम्बोधन गरेकी उनले माधवकुमार नेपाल आफूहरुको नेता भएको भन्दै एमालेमा उनको आवश्यकता भएको बताइन् ।
शाक्यको यो आव्हानको जवाफ ओलीले दिए । शाक्यपछि सम्बोधन गरेका ओलीले एमालेमा माधवकुमार नेपालको कुनै आवश्यकता नभएको बताए । उनले भने, ‘हुन त केही साथीहरु अहिले पनि भन्नुहुन्छ, माधव कमरेड आउनुस् तपाईंको आवश्यकता छ । फेरि फुटाउन उहाँको आवश्यकता छ यहाँ ? फेरि फुटाउने ? के गर्न आवश्यकता छ माधव कमरेडको म बुझ्दिनँ ।’
ओलीले नेता नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर तीर्थयात्रामा निस्किएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘माधव नेपालले घरमा आगो लगाए, निधारमा खरानी घसे अनि तीर्थयात्रामा निस्किएका छन् ।’
देश, जनता र लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्यमाथि माधव नेपालले खेलवाड गरेको ओलीको आरोप छ । ‘माधव नेपालले १५ वर्ष पार्टी चलाए, प्रधानमन्त्री बने, अब त जानुपर्ने त कहीँ छैन’, उनले भने, ‘तर, आफ्नो इगोका कारण देश, जनता र कार्यकर्ताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्छ ?’
माधव नेपालले झुक्याएको र झुक्किएका कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा फर्कन आह्वान गरेका उनले प्रचण्डसँग गएका कार्यकर्तालाई पनि फर्कन आग्रह गरे । ‘तपाईहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो कि प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता हो, माओवादी केन्द्रको नाममा रहेका साथीहरूलाई एमालेमा फर्कन म आह्वान गर्छु’, ओलीले भने ।
कम्युनिस्टको सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाएकोप्रति आक्रोश पोख्दै ओलीले भने, ‘मैले केही मन्त्री दिएको थिएँ नि, अहिले हेर्नु त देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाल खोइ मन्त्री दिएको ? प्रचण्डको पछि लागेर के हुन्छ । आउनुस् एकीकृत एमालेमा ।’
अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालले दुईपटक पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाए । कम्युनिस्ट एकता हल्लाउन नसक्ने गरी दुई तिहाइ बहुमत पाएको भए पनि केही नेताहरूको ईष्या, स्वार्थले लथालिंग बनाएको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि आक्रोश पोखेपछि अध्यक्ष ओली सरकारमाथि खनिए । उनले जनतालाई उत्तेजित बनाउन कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले जनतामाथि सत्ताको दुरुपयोग गरेर बल प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘जनतमाथि सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेर बल प्रयोग गरेको छ’, ओलीले भने, ‘जनतालाई उत्तेजित बनाउने कार्य नगर्नुस्, प्रतिकारमा उत्रने अवस्था नआओस् ।’ आफ्नो शासनकालमा जनतामाथि बल प्रयोग नभएको दाबी गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले अहिले सरकारले जनताको विरोध प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।